Mozambika : Mitokona Mitaky Karama Ambonimbony Kokoa Ireo Mpiasan’ny Fahasalamana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2013 10:49 GMT
Francisco J. P. Chuquela, mpiara-miasa amin'ny gazety @Verdade mpikambana ao amin'ny Global Voices any Mozambika no nitatitra ity tantara ity ho an'ny Global Voices
Tonga tamin'ny fara-tampony ny hetsika rehefa nosamborin'ny mpitandro filaminana i Dr. Jorge Arroz, filohan'ny Associação Médica de Moçambique, ny 26 May 2013 noho ny fanamelohana ho mpanakorontana (famporisihina ny hatezerana na fiokoana amin'ny governemanta). Vokatry ny fanetsehana ny vahoaka niaraka tamin'ny haino aman-jery ary ny fanelanelanan'ireo mpahay lalàna teo anoloan'ny tobin'ny mpitandro filaminana no antony namotsorana an'i Arroz ora vitsy tato aoriana.
Heverin'ireo mpandinika fa mampitombo isa ireo mpiasan'ny Fahasalamana mitokona ny nisamborana an'i Arroz. “Tatitry ny salam-pahavitrihin'ireo mpitokona avy amin'ireo irakiraka : nidina ho dimy isan-jato izany raha 90 isan-jato teo aloha”, notaterin'ny The Stream-n'ny Aljazeera ny 28 May.
Ny 28 May , olon-tsotra iray no nitatitra hoe nihaona tao amin'ny Hopitaly Be tao Beira ireo mpiasa matianina amin'ny fahasalamana.
Tao amin'ny toraka bilaogy mivantana noforonin'ny @Verdade mba handraisana ireo tatitra ataon'ny mponina momba ny fitokonan'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana, dia nisy fijoroana vavolombelona ny amin'ny fahabangan'ny fahadiovana, ny fanafody, ary ireo filàna fototra hafa. Nisy olona iray nitatitra tamin'ny SMS ny marainan'ny 28 May :
Tao amin'ny fotoam-pivoriana tao amin'ny Hopitaly Ben'i #Maputo io maraina io “tsy misy akanjo, tsy misy fitsaboana fery (pansement), tsy misy fampatoriana (anesthesie). Tsy azo atao ny miasa amin'izany.”
Naverin'ny Fikambanana Medikaly any Mozambika sy ny Kaomisionan'ny Mpiasan'ny Fahasalamana fa tsy hijanona ny fitokonana raha tsy atsahatry ny governemanta ny fampihorohoroana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpiasa hafa nanatevina laharana ny fitakiana, ary mahafa-po ny valin'ny fangatahan'izy ireo. Tsy eken'izy ireo ny fomba nanamboarana ny karamany, satria fanivaivana raki-pifanarahana teo amin'ny fikambanana sy ny governemanta tamin'ny volana Janoary izany.